Cabo Verde Airlines: fampiatoana ny sidina Italia noho ny Coronavirus COVID-19
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cabo Verde Airlines: fampiatoana ny sidina Italia noho ny Coronavirus COVID-19
Seranam-piaramanidina Cabo Verde
Taorian'ny fanapahan-kevitry ny Governemanta Cabo Verde hampiato ny sidina rehetra eo anelanelan'ny Italia sy Cabo Verde hatramin'ny 20 martsa 2020 noho ny Valanaretina Coronavirus (COVID-19), Cabo Verde Airlines dia nametraka paikady hiarovana ny mpandeha rehetra miaraka amin'ny sidina voasoratra mandritra ny fe-potoana voalaza.
Ao anatin'ny paikadim-piarovana ny mpandeha, ny mpandeha manana tapakila ao anatin'ny vanim-potoana voatondro izay mbola tsy nanomboka ny diany (na eo anelanelan'ny Cabo Verde / Italia / Cabo Verde sy ny fiaviany / toeran-kafa any amin'ny tamba-jotra CVA amin'ny alàlan'ny Cabo Verde), dia afaka mamerina mandefa tapakila amin'ny daty aorian'ny fe-potoana fameperana tsy misy sazy (kaody famerenana COVID-19) na mahazo vola feno amin'ny tapakila tsy ampiasaina na ampahany amin'ny tapakila tsy ampiasaina raha toa ka efa nanomboka ny diany talohan'io fetra io.
Ireo mpandeha dia mety manatona ny paikady fiarovana ny mpandeha Cabo Verde Airlines ary ny fanavaozana hafa amin'ny www.jasobamobies.com.
Ny Cabo Verde Airlines dia manome antoka fa hanaraka ny tolo-kevitry ny International Air Transport Association (IATA), satria izahay izay fikambanan'ny World Health Organization (WHO) dia mitazona ny fifandraisana tsy tapaka amin'ireo tompon'andraikitra eo an-toerana mba hitandroana ny mpandeha sy ny ekipazy.
Ny isan'ireo trangana virus coronavirus tany Italia dia tafakatra 400.
Na dia eo aza ny ezaka iraisampirenena tsy mbola nisy toy izany mba hitazonana ny fihanaky ny fihanaky ny valan'ny coronavirus COVID-19, ny isan'ireo tranga tany Italia dia nahatratra 400. Izany dia fitomboan'ny 25 isan-jato tao anatin'ny 24 ora fotsiny.
Ny tena ifantohan'ny aretina dia any Italia, izay manondro ny fampiatoana ny sidina Cabo Verdes Airlines, na dia maro aza ny firenena hafa no nanomboka nanambara tranga vaovao izay niverina tany Italia.
Notaterin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) fa ny virus coronavirus dia miely haingana kokoa ankehitriny any ivelan'i Sina izay niandohany.
Maneran-tany maherin'ny 40 ny firenena hatreto no nitatitra tranga COVID-19 nahitana olona 80,000 3 mahery voan'io aretina io. Ny isan'ny lehibe indrindra amin'ireo dia mbola avy any Shina. Ity virus vaovao ity dia nalaza tamin'ny XNUMX volana lasa izay tamin'ny volana desambra.
Ceasars Republic Sottdsdale mamela ny filokana
Fironana momba ny dia ho an'ny Boomers, Gen X, Y & Z mifantoka amin'ny ATM